Arkiifiyada CERB - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Archives Tag: FARXAD
Degmooyinka Jefferson, Klickitat, Mason, Skagit, Snohomish iyo Whitman ayaa rajaynaya inay kobciyaan horumarka dhaqaalaha iyada oo loo marayo marin ballaadhan oo loogu talagalay adeegga xawaaraha sare, marin-u-furan furan OLYMPIA, WA - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) wuxuu oggolaaday $ 2,816,649 deyn dulsaar yar iyo deeqo loogu talagalay kaabayaasha dadweynaha si loo bixiyo adeeg xawaare sare leh, marin-u-furan furan, iyo $ 150,000 oo deeqo ah oo loogu talagalay daraasadaha suurtagalka dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuur. Mashaariicda Degmada Jefferson PUD # 1, magaalada
Deeqaha iyo amaahda dulsaarku waxay taageeraan horumarka dhaqaalaha si loo xoojiyo bulshooyinka ku nool gobollada Adams, Grant, Mason, Skamania iyo Walla Walla. OLYMPIA, Wash - Guddiga Dib u Soo Nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) wuxuu ansaxiyay $ 2.25 milyan oo deyn iyo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalnimada dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka magaalooyinka Othello, Stevenson iyo College Place iyo dekedaha Moses Lake, Boqortooyada Boqortooyada iyo Shelton.
CERB waxay xaqiijisay $ 2,572,039 oo deyn iyo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalnimada dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka Dekedda Degmada Douglas, Port of Pasco, Port of Port Townsend, Pacific County, Port of Anacortes, iyo Magaalada Everett.
Laba ka mid ah mashaariicda ugu waa weyn waxaa ka mid ah maalgashiga lamaanaha gaarka loo leeyahay ee $ 120 milyan oo ay bixisay Ururka Isbitaalka Bulshada ee Sunnyside oo loogu talagalay dhismaha cusbitaal cusub iyo $ 10 milyan oo ay bixisay KW Partners / FedEx oo ku taal Port of Everett. OLYMPIA, WA - Guddiga Dib-u-nooleynta Dhaqaalaha Bulshada Gobolka Washington (CERB) ayaa maanta ansixiyay $ 4,956,250 oo ah deeqo iyo amaah dulsaar yar oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalnimada dhaqaalaha ee sagaal degmo oo gobolka oo dhan ah. Mashaariicdu waxay bartilmaameedsanayaan kobaca ganacsiga iyo shaqada
CERB waxay ansaxisay $ 850,000 oo deyn iyo deeqo ah oo loogu talagalay horumarinta kaabayaasha bulshada iyo daraasadaha suurtagalka dhaqaalaha ee lagu bartilmaameedsanayo kobaca ganacsiga iyo shaqo abuurka magaalooyinka Othello iyo Airway Heights, Makah Tribe, iyo Dekedda Sunnyside.